Ozi Ọma Luk Dere 21:1-38
Mkpụrụ ego abụọ nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye ji nye onyinye (1-4)
IHE ÀMÀ NKE IHE GA-EME (5-36)
Agha, oké ala ọma jijiji, ọrịa na-efe efe, ụkọ nri (10, 11)
Ìgwè ndị agha ga-agba Jeruselem gburugburu (20)
Oge ndị mba ọzọ (24)
Ọbịbịa Nwa nke mmadụ (27)
Ihe atụ gbasara osisi fig (29-33)
Na-echenụ nche (34-36)
Jizọs ziri ihe n’ụlọ nsọ (37, 38)
21 Mgbe Jizọs lere anya n’ebe igbe ndị a na-atụnye ego dị, ọ hụrụ ka ndị bara ọgaranya na-atụnye onyinye ha n’ime ha.+ 2 O wee hụ otu nwaanyị di ya nwụrụ, bụ́ onye dara ogbenye, ka ọ tụnyere obere mkpụrụ ego abụọ nke ga-azụta ihe dị nnọọ ntakịrị.*+ 3 Jizọs wee sị: “N’eziokwu, ana m asị unu na nwaanyị a di ya nwụrụ, nke dara ogbenye, tụnyere ego karịrị nke ha niile tụnyere.+ 4 N’ihi na ndị a niile si n’ọtụtụ ihe ha nwere na-atụnye onyinye ha n’igbe. Ma nwaanyị a tụnyere ihe niile o nwere, n’agbanyeghị na ọ bụ ogbenye ọnụ ntụ.”*+ 5 E mechaa, mgbe ụfọdụ ndị nọ na-ekwu banyere ụlọ nsọ, otú e si jiri nkume dị mma na ihe ndị e nyere Chineke chọọ ya mma,+ 6 ọ sịrị ha: “Ùnu hụrụ ihe ndị a niile? Oge na-abịa mgbe a ga-akwatu nkume a niile. E nweghị otu nkume a ga-ahapụ n’elu ibe ya.”+ 7 Ha wee jụọ ya, sị: “Onye Ozizi, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Gịnị ga-abụkwa ihe àmà ga-egosi na ihe ndị a agawala ime?”+ 8 O wee sị: “Lezienụ anya ka a ghara iduhie unu.+ N’ihi na ọtụtụ ndị ga-abịa n’aha m, sị, ‘Ọ bụ m bụ ya.’ Ha ga-asịkwa, ‘Oge ahụ a kara aka dị nso.’ Unu esokwala ha.+ 9 Mgbe unu na-anụkwa mkpọtụ agha na ọgba aghara, unu atụla ụjọ. N’ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ mee, ma ọgwụgwụ agaghị abịa ozugbo ahụ.”+ 10 Ọ gwakwara ha, sị: “Mba ga-alụso mba ọzọ agha,+ alaeze ga-alụsokwa alaeze ọzọ agha.+ 11 A ga-enwe oké ala ọma jijiji, ụkọ nri na ọrịa na-efe efe ga-adịkwa n’ebe dị iche iche.+ A ga-ahụkwa ihe ndị na-atụ egwu, nweekwa oké ihe àmà dị iche iche n’eluigwe. 12 “Ma tupu ihe a niile emee, ndị mmadụ ga-ejide unu ma kpagbuo unu,+ kpụrụ unu gaa n’ụlọ nzukọ, tụbakwa unu n’ụlọ mkpọrọ. A ga-akpụgakwa unu n’ihu ndị eze na ndị gọvanọ n’ihi aha m.+ 13 Unu ga-eji ohere ahụ gbaara ndị ọzọ àmà. 14 N’ihi ya, kpebienụ n’obi unu na unu agaghị ebu ụzọ mụgharịa otú unu ga-esi azara ọnụ unu.+ 15 N’ihi na m ga-enye unu amamihe, nyekwara unu aka ka unu mara ihe unu ga-ekwu. Ndị iro unu agaghịkwa enwe ike ịgbagha ihe unu kwuru.+ 16 Ndị nne na nna unu na ụmụnne unu na ndị ikwu unu na ndị enyi unu ga-ararakwa unu nye. Ha ga-egbukwa ụfọdụ n’ime unu.+ 17 Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n’ihi aha m.+ 18 Ma, otu mkpụrụ ntutu isi unu agaghị ala n’iyi.+ 19 Ọ bụrụ na unu atachie obi ruo ọgwụgwụ, unu ga-enweta ndụ.*+ 20 “Ma, mgbe unu hụrụ ka ìgwè ndị agha gbara Jeruselem gburugburu,+ maranụ na oge a ga-eme ka ọ tọgbọrọ nkịtị adịla nso.+ 21 Mgbe ahụ, ka ndị nọ na Judia malite ịgbaga n’ugwu.+ Ka ndị nọkwa na Jeruselem si na ya pụọ. Ka ndị nọkwa n’ime ime obodo ghara ịbanye na ya. 22 N’ihi na n’oge ahụ, Chineke ga-ekpe ndị mmadụ ikpe, ka ihe niile e dere n’Akwụkwọ Nsọ wee mezuo. 23 Ụmụ nwaanyị ndị dị ime na ndị ji nwa n’aka n’oge ahụ ga-ata ahụhụ.+ N’ihi na ezigbo nsogbu ga-adị n’ala a, a ga-atakwa ndị ala a ahụhụ. 24 A ga-ejikwa mma agha gbuo ha. A ga-adọrọkwa ha n’agha laa ná mba niile.+ Ndị mba ọzọ* ga-azọ Jeruselem ụkwụ, ruo mgbe oge ndị mba ọzọ ga-ezu.+ 25 “A ga-ahụkwa ihe àmà dị iche iche n’anyanwụ na n’ọnwa nakwa na kpakpando.+ Mba dị iche iche ga-ahụju anya n’ụwa n’amaghị ihe ha ga-eme n’ihi otú oké osimiri si ebigbọ na otú o si amali elu. 26 Ndị mmadụ ga-atụbọkwa n’ihi egwu nakwa n’ihi ihe ndị ha na-atụ anya ga-eme n’ụwa, n’ihi na a ga-eme ka ihe* ndị dị n’eluigwe maa jijiji. 27 Mgbe ahụ, ha ga-ahụkwa Nwa nke mmadụ+ ka ọ na-abịa n’ígwé ojii n’ike na ebube dị ukwuu.+ 28 Ma mgbe ihe ndị a niile malitere ime, guzonụ kwem, weliekwanụ isi unu elu, n’ihi na oge Chineke ga-anapụta unu eruola nso.” 29 O mekwaara ha otu ihe atụ, sị: “Leruonụ osisi fig na osisi ọzọ niile anya.+ 30 Mgbe ha mara ifuru, unu na-ahụ ya, mara na oge osisi ji amị mkpụrụ dị nso. 31 Ma ununwa, mgbe unu hụrụ ka ihe ndị a na-eme, maranụ na Alaeze Chineke dị nso. 32 N’eziokwu, ana m asị unu na e nweghị ihe ga-eme ka ọgbọ a nwụchaa ruo mgbe ihe ndị a niile mere.+ 33 Eluigwe na ụwa ga-ala n’iyi.* Ma, e nweghị ihe ga-eme ka okwu m laa n’iyi.*+ 34 “Ma kpacharanụ anya ka iribiga ihe ókè na ịṅụ oké mmanya+ na nchegbu nke ndụ ghara ịnyịgbu obi unu,+ ụbọchị ahụ abịa mgbe unu na-atụghị anya ya 35 dị ka ọnyà.+ N’ihi na ọ ga-abịa mgbe ndị niile bi n’ụwa na-atụghị anya ya. 36 N’ihi ya, mụrụnụ anya,+ na-arịọsikwanụ arịrịọ ike+ mgbe niile ka unu nwee ike ịgbanahụ ihe ndị a niile ga-eme, nweekwa ike iguzo n’ihu Nwa nke mmadụ.”+ 37 N’ehihie, ọ na-ezi ihe n’ụlọ nsọ. Ma n’abalị, ọ na-apụ gaa nọrọ n’ugwu a na-akpọ Ugwu Oliv. 38 Mmadụ niile na-abịakwutekwa ya n’ụlọ nsọ n’isi ụtụtụ ka ha nụ okwu ya.
^ Na Grik, “mkpụrụ ego leptọn abụọ.” Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “ga-enweta mkpụrụ obi unu.”
^ Ma ọ bụ “Ndị Jentaịl.”
^ Na Grik, “ike.”
^ O nwere ike ịbụ ndị na-achị achị na ndị ha na-achị n’ụwa ọjọọ a ka a na-ekwu maka ha.
^ Ma ọ bụ “ghara imezu.”